ကုညီကြပါ - MYSTERY ZILLION
October 2009 edited September 2010 in DTP
Pagemarker နဲ့ လိပ်စာကဒ်လုပ်နည်းနဲ့့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလုပ်နည်းလေး သိချင်ပါတယ်
အရင်ဆုံ းလိပ်စာကဒ်ကို ဘယ် page size နဲ့ထုတ်မှာလဲ စဉ်းစားလေ . ဒါမှ File - new
မှာ လိုချင်တဲ့ size ကိုယူလိုက်ပါ
ပြီးရင် Ruler bar ၂ ခု ဆုံတဲ့နေရာက နေ
စာမျက်နှာ အတွင်းထဲ က လိုင်း ၂ ခု ဆုံတဲ့နေရာ အထိ ဆွဲလိုက်ပါ
ဒါကို zero lock ယူတယ်လို့ ပြောပါတယ်
Ruler Bar က ၂ ခု၇ှိတယ်နော်
X and Y ဆိုပြီး
X Ruler bar က နေ Selection Tool နဲ့လိုချင်တဲ့ အမြင့် ကိုယူပါ eg ... ( 2')
Y Ruler bar ကနေ Selection Tool နဲ့ လိုချင်တဲ့ အကျယ် ကိုယူပါ eg... (3')
ပြီးရင် Tool Box ထဲကနေ Rectangle Tool ကိုယူပြီး ဆွဲထားတဲ့ 2-3 အကွက်ထဲမှာ Rectangle တခုဆွဲံလိုက်ပါ
ပြီးရင် အားလုံးကို Select မှတ်လိုက်ပါ Group ဖွဲ့လိုက်ပါ
ွGroup ဖွဲ့နည်းက အားလုံးကို Select မှတ် Ctrl+ G ကိုနှိပ်လိုက်နော်
အားလုံး Select ၀င်ဖို့အရေး ကြီးတယ်နော် Shift + Click ကိုသုံးပြီးမှတ်ပါ
ဒီအဆင့်ထိ ရပြီ ထင်ပါတယ်
ရလာတဲ့ ကဒ်တခုကို Select မှတ်ပါ
Edit - Paste Multiple
Box တခု ကျလာမယ်
Paste မှာ ကိုလိုချင်တဲ့ ကဒ် အရေအတွက်ကိုပြောတာ . အခု တော့ 1 လို့ပဲ ထည့် လိုက်ပါနော်
ံHorizontal offset ဆိုတာက ဘေးမှာ ဘယ်လောက်က နေစပြီးနောက်တကွက်ကိုထွက်စေချင်တာလဲလို့မေးတာပါ
ဒါဆို3ယူထားတာဆိုတော့ 3.5 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
Vertical offset ဆိုတာက အောက်မှာ ဘယ်လောက်ကနေစပြီး ထွက်မှာလဲ လို့မေးတာပါ
အခု တော့ အောက်မှာ မလိုချင်ဘူးလေ အဲဒါကြောင့်0ပဲ ထားလိုက်ပါ
ပြီး ရင် 0k နဲ့ ထွက်လိုက်ပါ
ဒါဆို ကဒ်လေး ၂ ခု ရပြီပေါ့
ဒီကဒ်လေး ၂ ခုကို select မှတ်ပြိး Group ဖွဲ့လိုက်ပါအုံး
Horzional offset -0( ဘေးမှာ ထွက်ချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ပါ )
vertical offset - 2.2 (2ယူထားတာဆိုတော့ 2.2 လောက်မှာ စထွက်စေချင်လို့ပါ )
ဒါဆို လိုချင်တဲ့ လိဒ်စာကဒ်လေးရပြိပေါ့နော်